Apple Watch nwere ike ịmanye Pebble ime ego | Esi m mac
Ruo ugbu a enweghị ndị ahịa Apple Watch na-ere ahịa na ọ bụ na ndị si na Cupertino na-ekwo ekworo na-echekwa data a, ma ọ bụ n'ihi na ọ bụghị ihe ha tụrụ anya ya ma ọ bụ n'ihi na ha achọghị inye ndị na-asọmpi ha ihe ngosi. Agbanyeghị, enweela ọtụtụ ndị nyocha na-eche na Apple n'ezie Ha na-enweta ọnụọgụ stratospheric na usoro nke ahịa Apple Watch.
Anyị nwere ike ịchọpụta na mkpọsa nke ụlọ ọrụ ndị ọzọ ga-arụ, gụnyere Pebble, nke bụ nke anyị na-ekwu maka taa n'isiokwu a. Apple anaghị agbanahụ n'eziokwu na n'ọnwa ndị na-adịbeghị anya, ọ kwụsịghị mgbasa ozi maka Apple Watch, ma ihe ahụbeghị bụ mbelata nke chilling 30%.
Ọ bụrụ na ị gbasoro mbido nke smartwatches na afọ ole na ole ị ga-amata nke ahụ Ogwu Ọ bụ otu n'ime ndị ụlọ ọrụ izizi weputara ya wearaable nzọ, nke Pebble nche. Ugbu a anyị nwere ike ịgwa gị na ụlọ ọrụ ahụ ekpebiela mee 30% ego na ụdị ya niile, ọbụlagodi nke ọhụrụ ahụ.
Ọ bụ ezigbo ozi ọma maka ndị ọrụ ahụ niile chọrọ igwe elekere na Pebbles dị ezigbo mma. Ọnụahịa nke ụdị dị iche iche ga-abụ ihe ndị a:
Obere Oge Obere - euro 229,5 - mbupu mba ofesi n'efu.
Obere Oge Obere - Site na euro 249,95 - mbufe mba ofesi.
Obere oge - euro 169,95 - mbufe mba ofesi.
Obere okwute - euro 149,95 - mbufe mba ofesi.
Okwute Pebble - euro 99,95 - mbufe mba ofesi.
Onye ọ bụla na-eche ihe kpatara mkpebi a bụ na ọ bụ na ahịa nke ngwaọrụ ahụ adaala ọtụtụ ma ọ bụrụ na anyị chere na ọ ga-emetụta windo ụlọ ahịa. nzo dika Apple Watch ma obu ohuru Fitbit Blaze ma obu ZenWatch 2 si Asus.
Nke mere na ị nwere ike ịhụ njirimara niile nke obere Pebble, ị nwere ike ileba anya na ego ndị ụlọ ọrụ na-enye na weebụsaịtị ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Ngwaahịa Apple » Apple Watch » Apple Watch nwere ike ịmanye Pebble ime ego
Apple na-ere DJI's Phantom 4 Drone na ụlọ ahịa ya